July | 2017 | Radio Himilo
Manchister United oo ku dhawaaqday heshiiska Nemanja Matic.
radio himilo July 31, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 44 Views
Muqdisho>: Manchester United way ku faraxsantahay in ay ku dhawaaqdo Heshiiska Nemanja Matic, kaas oo ka yimid Chelsea, wuxuu saxiixay sadex sano oo Heshiis ah, wuxuuna dooq u haystaa sanad kale oo dheeraad ah, ayaa lagu qoray mareegta rasmiga ah ...
Barcelona oo u dhaqaaqaysa kubbad-sameeye Mesut Ozil.
radio himilo July 31, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 69 Views
Muqdisho – Ciyaaryahanka qadka dhexe ee Arsenal, Mesut Ozil ayay wararku sheegayaan in uu si degdeg ah diiradda ugu fuulay Barcelona si ay ula wareegaan. Sida la warinayay, kooxda Catalan waxaa diiradda u saarnaa xiddiga qadka dhexe ee Liverpool, Philippe ...
radio himilo July 31, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 75 Views
Muqdisho – Macalinka Manchester United, Jose Mourinho ayaa caddeeyay in uu doonayo sii heysashada ciyaaryahanka qadka dhexe ee Andreas Pereira. Bilawga xagaagii dhamaaday ayuu xiddigan u baxay amaah isaga oo ku biiray kooxda dalka Spain ka dhisan ee Granada, Brazilian-kan ...
Maqal – Barnaamijka Bandhigga Dhaqalaha
radio himilo July 31, 2017	Idaacadda Himilo Leave a comment 109 Views
Halkan ka dhageyso Barnaamijka Bandhigga Dhaqaalaha. Waxaa inoo diyaariyay wariye Mahad Mahamed Ali.
Maqal – Barnaamijka Dalka iyo Dadka.
radio himilo July 31, 2017	Idaacadda Himilo Leave a comment 79 Views
Halkan ka dhageyso barnaamijka Dalka iyo Dadka.
Cano Cristales – Webiga ‘Shanta Midab’ ama Qaanso-roobaad.
radio himilo July 31, 2017	Features, Wararka Leave a comment 58 Views
Muqdisho – Loo yaqaan ‘Webiga Shanta Midab’ ama ‘Webiga Qaansa-roobaad’, Cano Cristales waa mid kamid ah webiyada ugu cajiibka badan caalamka. Inta ugu badan sanadka, Cano Cristales river oo ku yaalla dalka Colombia kaliya waa mid aan ka duwanayn qulqul ...
Maqal – Barnaamijka Dalka iyo Dadka
radio himilo July 30, 2017	Idaacadda Himilo Leave a comment 107 Views
Afarta cayaaryahan ee ugu koobabka badan laacibiinta kubadda cagta.
radio himilo July 30, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 60 Views
Muqdisho – Kadib markii kooxda PSG ay ku guulaysatay French Super Cup, xiddigii hore ee kooxda Barcelona difaaca midig uga ciyaari jiray ee Dani Alves ayaa dhaafay Zlatan Ibrahimovic isaga oo noqday laacibka saddexaad ee ugu koobabka badan cayaartoyda ugu ...
Pep Guardiola oo doonaya ciyaaryahan kale oo difaac ah.
radio himilo July 30, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 43 Views
Muqdisho – Tababaraha kooxda Manchester City, Pep Guardiola ayaa lasoo warinayaa in uu wali suuqa kala iibsiga ugu jiro helidda cayaaryahan cusub oo ka ciyaara difaaca kahor inta aan lasoo gabagabayn dhamaadka bisha August. Muwaadiniinta ayaa horay u qarash gareeyay ...
Dhageyso – Barnaamijka Dalka iyo Dadka.
radio himilo July 30, 2017	Idaacadda Himilo Leave a comment 70 Views
Halkan ka dhageyso barnaamijka Dalka iyo Dadka oo kamid ah barnaamijyada maalinlaha ah ee ka baxa idaacadda Himilo ee Muqdisho.